Turkiga oo ku raad-jooga Saraakiil u baxsaday wadanka Giriiga - Wargane News
Home Somali News Turkiga oo ku raad-jooga Saraakiil u baxsaday wadanka Giriiga
Dowlada Turkiga ayaa ka codsatay wadanka Giriiga inuu usoo gacan geliyo 8 sarkaal oo ka tirsanaa ciidamadii isku dayey inqilaabkii dhicisoobay, kuwaasi oo diyaarad helikobter ah ulla baxsaday dhinaca dalka Giriiga.
Saraakiishan oo la baxsaday diyaarada nooca qumaatiga u kaca ah ee Blackhawk ayaa magangelyo siyaasadeed weydiistay dowlada Giriiga oo ay Turkiga jaarka yihiin.
Xukuumada Giriiga ayaa si deg degleh ugu celisay Diyaaradii militariga Turkiga lahaa wadankii lagala soo baxsaday, balse saraakiishii watay ayaa weli ku xiran dalka Giriiga.
Askartan baxsadka ah ayaa maanta oo Axad ah la horgeyn doonaa Maxkamada wadanka Giriiga oo dacwadooda dhageysan doonta, waxaana sidoo kale la filayaa in lagu soo oogo dacwad ah inay hawada Giriiga kusoo galeen si sharci daro ah, walow aan la aqoon in Giriiga uu raggan magangelyo siin doono ama uu dib ugu celin doono dalka Turkiga.
Saraakiisha la xiray oo ay ku jiraan Jeneraalo iyo Korneylo ayaa waxaa kamid ah Taliyihii Guutada 3aad ee Turkiga oo fadhigoodu ahaa magaalada Istanbul, Jeneraal Erdal Ozturk.
Xukuumada Madaxweyne Tayyib Erdogan ee Turkiga ayaa sii wada olola ay ku raafeyso saraakiishii iyo askartii ka qeyb qaatay inqilaabkii fashilay, waxaana maanta oo Axad ah la shaaciyey in xilalkii laga qaadi doono Garsoorayaal gaaraya 2 kun oo la sheegay inay ku lug lahaayeen inqilaabka. Dadka hada xabsiga la dhigay ayaa la sheegay in tiradoodu gaartay in ka badan lix kun oo qof.
War Deg Deg Ah: Madaxwayne Siilaanyo Iyo Wafti Uu Hogaaminayo Oo Goor-dhawayd U Baxay Goboladda Galbeedka Somaliland Iyo Ujeedada Socdaalkooda